နယူးပညာရေးဆိုင်ရာတစ်နှစ်တာသိမ်းယူ Manisa ပို့ဆောင်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များအတွက် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ45 Manisaသိမ်းယူ Manisa ပို့ဆောင်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များအတွက်နယူးပညာရေးဆိုင်ရာတစ်နှစ်တာ
08 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 45 Manisa, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
manisada အသစ်ကပညာရေးသင်ကြားမှု donemi သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအမံခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်
တနင်္လာနေ့စတင်မည်ဖြစ်သော Manisa မြူနီစီပယ်, စက်တင်ဘာလ92019-2020 ယင်းပညာသင်နှစ်တွင်များအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလယ်ပြင်၌အစီအမံများကိုယူ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့အောင်မြင်မှုဆန္ဒကိုအားလုံးကျောင်းသားများအဖို့ဆက်သွယ်ခဲ့ကြသည်သမ္မတဖြင့်ဘာသာရပ်အပေါ်တစ်ဦးကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Manisa မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသစ်ပညာသင်နှစ်အပေါ်ယူဆောင်ရွက်မှုများခဲ့: "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသား 2019-2020 ပညာရေးစဉ်အတွင်းချောချောမွေ့မွေ့နှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာအားလုံးလိုအပ်သောအစီအမံယူကျောင်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုသေချာစေရန်အလို့ငှာ။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းနှင့် Manisa ၏ခရိုင်အတွင်းရှိတနင်္လာနေ့ကျောင်းဘတ်စ်ကားန်ဆောင်မှုများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့9စက်တင်ဘာလ 2019 နာရီ entry ကိုနှင့်ထွက်ပေါက်၏အချိန်အညီပွုပွငျပွောငျးလဲခဲ့သညျ။ ဒါ့အပြင် Manisa ဗဟိုအတွက် 303 နှင့် 304 အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှ switching အားဖြင့်ကျောင်းမှကျောင်းသားများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ Morphou ဧရိယာထဲမှာဒါကျောင်းများကိုညွှန်ကြားဖို့မြင့်မားသောခရီးသည်တင်စွမ်းရည်အသစ်များလိုင်းများ, အနီးကပ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 ကျောင်း၏အရှေ့ဘက်နှင့်ဖွဲ့အဆင်ပြေနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေလျှပ်စစ်ဘတ်စ်ကားတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်ကိုရေတွက် ။ လုံလုံခြုံခြုံသူတို့ကျောင်းအရည်အချင်းများနှင့်ကြီးကြပ်မှုအပေါ်အတိုင်းအတာကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားအားလုံးထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်ကိုဝင်ရောက်မယ်ဆိုရင် J-ပန်းကန်ကားတစ်စီးနှင့်အတူ မှလွဲ. ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုယာဉ်များကျောင်းကိုဝင်ရောက်ခွင့်နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ကြောငျးသားမြားကိုပေးန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Manisa မြို့ပြသူတို့ကိုမြှို့နယ်သောကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအသစ်များကိုပညာသင်နှစ်ကာလ၌ရှိသမျှသောအောင်မြင်မှုအလိုရှိ၏။ "
နှစ်သစ်ကူး IMM ဆောင်ရွက်ချက်များဆုံးမဩဝါဒပေး 17 / 09 / 2018 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ယခုနှစ်ရဲ့ "Intelligent မြို့ပြဖြစ်ထွန်းမှု" ဟုအဆိုပါစီမံကိန်းအားအကောင်အထည်ဖော်များ၏အခြေအနေတွင်အသစ်တစ်ခုအယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ 2018-2019 ပညာသင်နှစ်, မိဘများကသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေ, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ယာဉ်မောင်းအင်တာနက်ကိုကျော် query နိုင်ပါလိမ့်မည်သင်ယူနေကြသည်။ ကျောင်းများ၏ 17.09.2018 06 သမိုင်းမှာ, ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်နေ့ကို: 00 - 14: (လက်မှတ်ပေါင်းစည်းရေးတွင်ထည့်သွင်းထားတဲ့) အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် 00 နာရီအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ IMM ကပေးတဲ့; အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကျောင်းဝန်ဆောင်မှုမော်တော်ယာဉ်များနှင့်ကျောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်မောင်း၏ Non-အသုံးပြုမှုကိုလက်မှတ်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းလုပ်ပေးမည်မဟုတ် School တွင်ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်း။ ကျောင်းတွေသည်အထိပြီးစီးရန်စာရွက်စာတမ်းများ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပညာသင်နှစ်, ပို့ဆောင်ရေးယူခံရဖို့ပညာရေး 2018-2019 အစီအမံများ၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညွှန်ကြားမှုအတွင်း ...
အသစ်ကပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်အဆင်သင့် Mota 08 / 09 / 2017 Malatya မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ (Mota), အချို့ယွင်းသစ်ကိုပညာသင်နှစ်တစ်နှစ်များအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းသစ်ကိုကာလ၌ဖြစ်ပျက်ပါဘူးချဉ်းကပ်ပါကခံရကြောငျးသားမြား၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတချို့အတိုင်းအတာကိုယူ။ အားဖြည့်ခြင်းနှင့်အချိန်ကိုပေးအပ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်လိုင်းယာဉ်များများ၏ပြင်းထန်မှုအကွာအဝေးကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်လိုအပ်သောအချိန်များအားပြန်လည်စီစဉ်ခြင်းအပြင်၌။ "ချွတ်ရတဲ့၏6မိနစ် TRAMBUS ထားကြသော" သက်ဆိုင်ရာ Mota အားဖြင့်ဘာသာရပ်လုပ်ကြေညာချက်အပေါ်အစီအမံများ၏နယ်ပယ်, လိုင်း၏အချိန်ကြားကာလများအားပြန်လည်စီစဉ်ခြင်းပြင်းထန်မှုသတင်းများအရအပိုဆောင်းအချိန်ပေးထားသောနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှနည်းလမ်း stiffening လိုအပ်သောယူဆခဲ့သည်တွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကြေညာချက်အများစုပြင်းထန်သောလိုင်း-တက္ကသိုလ်လိုင်းကို TRAMBUS စရဖဟု Malatya ၏ခေတ်သစ်အတွက်န်ထမ်း, ခေါ်ဆောင်သွားအထူးသဖြင့်အသစ်က TRAMBUS ...
Sakarya ပို့ဆောင်ရေးလိုင်းများအတွက်နယူးပညာရေးခေတ်္ဘပိင် 14 / 09 / 2018 လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်လီ Oktar ဤသို့ကျောင်းများနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အဖွင့်မှာလုပ်အစီအစဉ်များကြေညာလိုက်ပါတယ်: "4 ချိတ်ဆက်စည်ပင်သာယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းဝင်းဘတ်စ်ကား, 19 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန် 26 ကျနော်တို့ကိုရေတွက်လိုင်းများ၏နံပါတ်တိုးလာကြပါပြီ။ Yenikent လွယ်ကူခြင်းကျောင်းပရဝုဏ် 21 ကျနော်တို့အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြ 22 ဘတ်စ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ဒေသတွင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အရေအတွက် Korucuk ဆေးရုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 25 dial မှနှစ်သိမ့်ဆောင်ခဲ့လေ၏။ ပိုကောင်းရ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။ Sakarya မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဌာနဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်လီ Oktar စက်တင်ဘာလ 17 အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဖန်ဆင်းအစီအစဉ်များကိုရှင်းပြ, တနင်္လာနေ့တွင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်ရှေ့ဆက်သစ်ကိုပညာသင်နှစ်၏ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းကကျောင်းသားတွေကိုလက်လှမ်း၏အချက်မှာလိုအပ်သောခြေလှမ်းများသူတို့ကြောင့်လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Oktar ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်အစီအမံခဲ့သောသဘောပေါက်ပြောကြားခဲ့့သည်က ...
ယင်းပညာသင်နှစ်တွင် interagency လွှဲပြောင်းခွဲတမ်း၏ Anadolu တက္ကသိုလ် 2016-2017 နွေဦးစာသင် 18 / 01 / 2017 Anadolu တက္ကသိုလ် 2016-2017 ပညာသင်နှစ်နွေဦးစာသင် interagency လွှဲပြောင်းခွဲတမ်း: အနွေဦးစာသင် interagency လွှဲပြောင်းခွဲတမ်းစဉ်အတွင်းကျောင်းတစ်နှစ် 2016-2017 ၏ Anadolu တက္ကသိုလ်ပညာရေးအတွက် 27 နောက်ဆုံးနေ့ 2017 ဇန်နဝါရီလအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားစာမေးပွဲဖြေဆို 30 ဇန်နဝါရီလများ၏သမိုင်း - ဖေဖော်ဝါရီလ 02 2017 အတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ လျှောက်ထားသူများသည်စာရွက်စာတမ်းများစေရန်လိုအပ်သည်: အသနားခံခြင်း, မှတ်တမ်း (မှတ်တမ်း) နှင့်သင်တန်းအကြောင်းအရာ, သင်ခန်းစာဒုတိယစာရွက်စာတမ်းများအတွက်တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းစည်းကမ်းပြစ်ဒဏ်ရရှိခဲ့ကြောင်းမေးမလျှောက်သောကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. , စီစဉ်နေပါတယ်။ ကျောင်းသို့မဟုတ်ကောလိပ်အစီအစဉ်များကိုအောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လူထုအခြေပြု ...
ယင်းပညာသင်နှစ်တွင် interagency လွှဲပြောင်းခွဲတမ်း၏ Anadolu တက္ကသိုလ် 2016-2017 နွေဦးစာသင်
ယူ Pre-ကျောင်းကို Kocaeli လုံခြုံရေးအစီအမံများ
Ovit ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆောင်ရွက်ချက်များ၏ Scope အပေါ်ဆိုင်းငံ့ခဲ့သည်